शिक्षा – Namaste Host
May 15, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on एसईई र कक्षा १२ को परीक्षा कहिले र कसरी होला ? नबनियुक्त शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले गरे यस्तो खुलासा
काठमाडौँ, जेठ १ गते । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) र कक्षा १२ को परीक्षाको विधिबारेमा छिटै निर्णय हुने बताउनुभएको छ । मन्त्रालयको दोस्रोपटकको कार्यभार सम्हाल्नुभएका मन्त्री श्रेष्ठले शुक्रबार पदवहाली गर्ने क्रममा सो कुरा बताउनुभएको हो । यतिबेला विशेष गरी एसईई र कक्षा १२ को परीक्षाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थी तथा तिनका अभिभावक र […]
April 3, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on पैसा कमाउने केही शुत्रः दिउँसो सपना देख्नुस् , धनी बन्न राती होइन !
पैसा भन्ने वित्तिकै महादेवको पनि तीन नेत्र हुन्छ भनिन्छ । पैसाको आवश्यकता कसलाई छैन । सबैलाई हुन्छ । किनकी बदलिदो परिवेश फेरिदो समाजमा उपभोग गर्ने बानी धेरैको छ ।आफ्नो चाहानाको बस्तु उपभोग गर्न पैसाकै जरुरत पर्छ । सामान्य जीवन यापन गर्नदेखि ठूलो विजनेस स्टार्ट गर्न पैसा नभइ नहुने कुरा हो ।पैसा कमाउन सकेन भने उसलाई […]
बीबीसीको १०० प्रभावशाली महिलाको सूचीमा परेपछि चर्चाको शिखरमा पुगिन् सपना रोक्का मगर। तैपनि उनका केही सपना किनारमै छुटेका थिए। त्यसमध्ये एक थियो पढाइ। त्यही सपना पुरा गर्न उनले पढाइ सुरु गरेकी छन्। उनी काठमाडौंको सुविधानगरस्थित हिमालयन ह्वाइट हाउस कलेजमा कक्षा ११ मा भर्ना भएकी छन्। उनले कानुन विषयमा अध्ययन सुरु गरेको कलेजका कार्यकारी निर्देशक नारायण […]
February 6, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on कक्षा ११ मा अध्ययनरत विद्यार्थीको अन्तिम परीक्षा विद्यालयले नै सञ्चालन गर्ने
काठमाडौँ । कक्षा ११ मा अध्ययनरत विद्यार्थीको अन्तिम परीक्षा सम्बद्ध विद्यालयले नै सञ्चालन गर्ने भएका छन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यसै शैक्षिक सत्रमा कक्षा ११ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको अन्तिम परीक्षा विद्यालयले नै गर्ने स्पष्ट गरेको छ । बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलले बोर्डले अन्तिम परीक्षा सञ्चालन गर्ने अधिकार विद्यालयलाई नै हस्तान्तरण गरेको जानकारी दिनुभयो […]